Ulwazi ngezothutho lukawonkewonke eTaiwan ngoku luyafumaneka kwiApple Maps | Ndisuka mac
U-Apple kule veki wazise ulwazi lwe ukuthuthwa koluntu eTaiwan. Ukusukela ngoku, ukuhamba ngoololiwe, iibhasi, iifriji kunye nezinye iinkonzo zothutho zikawonke-wonke kuya kuba lula kakhulu kubakhenkethi nakubemi baseTaiwan kwaye uya kuhlala ufika ngexesha ngoncedo lwenkonzo ye-Apple Maps. Ngale nto, kukho izixeko ezininzi ezinale nkonzo. Kubonakala ngathi iApple iqalile ukubonelela ngenkonzo kumakomkhulu, kuba kwimeko yaseSpain, yiMadrid kuphela enale nkonzo, ukuyivula kamva kwezinye iidolophu. Ndiyathemba ukuba esi senzo asilibaziseki, ukuze ungaphumi kwihukula kwiiMaphu ezinkulu zikaGoogle.
Ulwazi lokuqala lubonisa oko Isiqithi sonke sigutyungelwe hayi inkunzi kuphela. Abasebenzisi bawenza ngokuzimisela lo msebenzi, kwaye iziphumo zichanekile ubuncinci kwindlela yase-Taipei, uloliwe ohamba ngesantya esiphezulu eTaiwan, kunye noololiwe baseTaiwan. Ngokwahlukileyo, ukuthuthwa kweebhasi zasekuhlaleni kunye neenqanawa zabakhenkethi kubonakala ngathi zigutyungelwe kuphela kwizixeko ezikhulu.
Apple Maps ukufumana ulwazi ngotshintsho olucwangcisiweyo nolokugqibela. Umzekelo woku ibhasi yaseKu Kuang kumasipala wasePuli ebonisa utshintsho kwishedyuli yesiqhelo, ukuthathela ingqalelo imicimbi eyahlukeneyo yendawo. Ngale nto, inolwazi oluthe ngqo kwii-ofisi eziphambili zenkampani yezothutho.
I-Apple iya isomeleza kwaye iphucula iimephu zayo, ngoncedo lwezixhobo ezizifumene ngo-2014 kwiinkampani HopStop y Qalisa. Ukudityaniswa kweTaiwan kujoyina ezinye iindawo kwihlabathi liphela, ezinjengeParis, iSingapore, iHolland, iSpain, iAdelaide neMadrid. Sifuna zombini ulwazi lwezithuthi kunye nezothutho zikawonkewonke ukuba zenziwe ngokubanzi, kuba isicelo sifumana amanani apheleleyo kulwazi lwendawo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ulwazi ngezothutho lukawonkewonke eTaiwan ngoku luyafumaneka kwiApple Maps
Utshintsha njani amaqweqwe eencwadi zakho kwii-iBooks